မိုဘိုင်းမှတစ်ဆင့်ပေါင်းစည်းခြင်း Brigitte Klinkert ကအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဆုံးသူများအတွက်အသေးစားချေးငွေများပိုမိုထောက်ပံ့ရန်ကြေငြာခဲ့သည်
Posted by ကို Tranquillus | 17 ပင်လယ်, 2021 | web ပေါ်မှာ
အလုပ်အကိုင်အရအဝေးဆုံးလူများအတွက်ရွေ့လျားမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသောအတားအဆီးများသည်ထပ်တလဲလဲဖြစ်သည်။ လူ ဦး ရေ ၇ သန်းနီးပါး (သို့) လုပ်သား ဦး ရေ၏ ၂၀% ခန့်သည်ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်အခက်တွေ့နေသည်။ ၂၈% သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပေါင်းစည်းမှုတွင်အလုပ်လုပ်သောသူများသည် ၄ ​​င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်သို့မဟုတ်သင်တန်းများကိုရွေ့လျားနိုင်မှုအတွက်စွန့်လွှတ်ကြသည် သူတို့မှာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတွေမရှိဘူး၊ ယာဉ်မရှိဘူး၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်လည်းမရှိဘူး။
ပြင်သစ်ပြည်သူလူထု၏ရွေ့လျားမှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့်ပေါင်းစည်းရေး ၀ န်ကြီးဌာနသို့ပေါင်းစည်းရေး ၀ န်ကြီးဌာန ၀ န်ကြီးဘရစ်ဂျစ်ကလင်းဘတ်က Observatory ဘဏ် (OIB) အစည်းအဝေးတွင်မတ်လ ၁၆ ရက်အင်္ဂါနေ့ကကြေငြာခဲ့သည်။ အလုပ်ပေါင်းစည်းမှုစီမံကိန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ရွေ့လျားမှုဖြေရှင်းမှုများကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်အတွက်ကိုယ်ပိုင်အသေးစားချေးငွေအတွက်နိုင်ငံတော်အာမခံချက်၏ ၅၀% တိုးလာသည်.
ဒီအပိုဆောင်းပြည်နယ်ထောက်ခံမှုရည်ရွယ်သည် ၂၀၂၁ တွင်ချေးငွေ ၂၆၀၀၀ ၀ န်းကျင်ပေးရမည်၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ၁၅၀၀၀ ခန့်သည်နိုင်ငံ၏အာမခံချက်ဖြင့်အလုပ်မှထုတ်ပယ်ခံရသူများအတွက်၊ ကား ၂ စီး ၀ ယ်ခြင်း၊ သူ၏ကားပြုပြင်ခြင်း၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်အာမခံကိုဝယ်ယူရန်အတွက်ဖြစ်သည်.
မိုဘိုင်းမှတစ်ဆင့်ပေါင်းစည်းခြင်း Brigitte Klinkert ကအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဆုံးသူများအတွက်အသေးစားချေးငွေများပိုမိုထောက်ပံ့ရန်ကြေငြာခဲ့သည် ဇူလိုင်လ 10th, 2021Tranquillus
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလူမှုရေးကဏ္ဍမှ ဝန်ထမ်းများအတွက် လစာတိုးမြှင့်ပေးခြင်း
2021 အခွန်ရှောင်: အပုံမှန်အတိုင်းနှုန်းကို Grid